Ukushajwa kabusha kwefoni ye-Rebtel ngaphandle kwekhomishini
Lesi sikhathi sizochaza zonke izindlela zokwenza ukushajwa kabusha kweselula ye-Rebtel, ukuze abangani bakho bakwamanye amazwe bangathola ikhredithi ukuze bashaye izingcingo. Kodwa okokuqala ake sibone ukuthi iyini i-Rebtel nokuthi isebenza kanjani.
I-Rebtel yinkampani yezokuxhumana yase-Swedish, eyasungulwa ngo-2006. Bahlinzeka ngamasevisi omakhalekhukhwini, okuhlanganisa izingcingo zamazwe ngamazwe, imilayezo (i-SMS) kanye nemali yeselula ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Android, i-iPhone ne-Windows Phone yokusebenza.
Imaphi amazwe okungathunyelwa kuwo ukugcwaliswa kabusha?
Ngesevisi ka-Rebtel "Yokugcwalisa kabusha", ungakwazi thumela ibhalansi yeselula koxhumana nabo, hhayi eCuba kuphela, kodwa nakwamanye amazwe. Kubalulekile ukuthi iselula yoxhumana naye ikhokhwe kusengaphambili futhi inani elithunyelwe koxhumana naye lingasetshenziselwa izingcingo kuphela.
Ake sibone uhlu lwamazwe angathola lokhu kushajwa kabusha:
I-Rebtel ingenye yezinkampani ezimbalwa emhlabeni ukuthi ivumela ukushajwa kabusha ngaphandle kwekhomishini (kwamanye amazwe). Ngokungafani nabanye, i-Rebtel ibonisa inani eliqondile ozolikhokha ukuze uthumele ukushajwa kabusha.
Umuntu othola ibhalansi akudingeki ukuthi afakwe i-Rebtel kumakhalekhukhwini wakhe. Uma ukushajwa kabusha kuphumelela, uzothola umlayezo wokuqinisekisa. Kungase kuthathe amahora ambalwa ukuze isistimu ithumele ibhalansi kufoni yoxhumana naye.
Ngikuthumela kanjani ukushajwa kabusha nge-Rebtel ku-inthanethi?
Kufanele uqale ubhalise kusizindalwazi se-Rebtel esisemthethweni. Ngena ku umphefumulo wami, bhala inombolo yakho yeselula bese uchofoza ku-"Qhubeka". Uhlelo luthumela i-PIN kumakhalekhukhwini wakho ukuze uqinisekise umsebenzisi. Okulandelayo, ikhasi elisha livula lapho kufanele ubhale khona le phinikhodi bese uchofoza ku-"Joyina". Ekugcineni, engeza idatha kuphrofayela yakho futhi yikho.
1.- Ngemva kokubhalisa, ngena ekhasini le URebtel, chofoza isithombe sakho sephrofayela bese ucindezela "I-akhawunti yami".
2.- Chofoza okuthi "Thumela imali"
3.- Khetha izwe oya kulo bese ubhala inombolo yocingo yothintana naye
4.- Chofoza okuthi “Bonisa okunikezwayo okutholakalayo”, khetha inani bese uchofoza ku-“Qhubeka”
Ungawenza kanjani kabusha umakhalekhukhwini we-Rebtel kusuka kuhlelo lokusebenza?
Landa uhlelo lokusebenza lwe-Rebtel kusuka ku-Apple Store noma I-Google Play bese udala i-akhawunti, landela lezi zinyathelo ukuze uqale ukushaja kabusha:
1.- Vula uhlelo lwe-Rebtel kuselula yakho bese uchofoza ku-Menu
2.- Chofoza inkinobho ethi "Thumela imali"
3.- Chofoza okuthi "Thumela ukushajwa kabusha"
4.- Sesha ku-ajenda yakho othintana naye ozothola ukushajwa kabusha (kubalulekile ukuthi le nombolo ilondolozwe koxhumana nabo)
5.- Khetha inani ofuna ukulithumela futhi ekugcineni uchofoze okuthi "Thumela amakhredithi"
Ukushajwa kabusha kweselula kwe-Rebtel eCuba ku-inthanethi
Ukuze ushaje kabusha iselula ye-Rebtel kumngane noma isihlobo e-Cuba, udinga kuphela ukuba nekhompyutha noma i-smartphone enokufinyelela ku-inthanethi kanye nekhadi lesikweletu (lesizwe noma lamazwe ngamazwe) esandleni.
Nge-Rebtel ungathumela amakhredithi kumaselula aseCuba ukuze ojwayelene nabo bakwazi ukuxhumana. Amakhredithi akhokhelwa nge-USD futhi nge-Cubacell atholwa nge-CUC ukuze akwazi ukushaya izingcingo.
Khomba isiphequluli sakho ku rebtel.com/recharges bese ulandela izinyathelo ezisebhokisini elihambisanayo:
Faka inombolo yendawo ofuna ukuthumela kuyo ikhredithi
Khetha inani lokushajwa kabusha ofuna ukulithumela (CUC 10, 20, 30)
Cindezela okuthi "Thumela Ukushajwa kabusha"
Uma ungakabi nayo i-akhawunti ye-Rebtel, ungabhalisa khona manje
Phezulu kuselula » Okwelinye izwe » Ukushajwa kabusha kwefoni ye-Rebtel ngaphandle kwekhomishini
Gcwalisa iselula uye eCuba
Gcwalisa iselula evela eDominican Republic
Shaja kabusha iselula ye-Soriana
Shaja kabusha umakhalekhukhwini uye e-Ecuador
Shaja kabusha iselula yakho eVenezuela
Khuphula iselula uye eColombia
Gcwalisa iselula eMexico
Imininingwane mayelana namakhukhi
Khuphula i-Mobile 2022 - Ungayifaka kanjani kabusha iselula yakho isinyathelo ngesinyathelo